Bepc 2019: Pastor ee sanadka 52 ee musharixiinta - TELES RELAY
ACCUEIL » kale • WAXBARASHADA • aan caadi ahayn Bepc 2019: A wadaad ah ee sanadaha 52 ka mid ah musharrixiinta
Bepc 2019: A wadaad ah ee sanadaha 52 ka mid ah musharrixiinta
Kumanaan arday oo ka mid ah ardayda waa hagaha diinta, wadaad ah Behi Koffi, oo ah 52.
439.529 ardayda fasalada 3e, tan iyo Isniintii 17 June 2019, waxay la kulmaan imtixaanada qoraalka ah ee wareegga Brevet d'études duer (Bepc). Waxay ka kooban yihiin maadooyin kala duwan si loo helo shahaadadan taas oo cunaqabatayn afar sano ah (4) daraasado wareega koowaad. Kumanaan arday oo ka mid ah ardayda, waxaa jira hage diineed, Pastor Behi Koffi, sida uu macallin ku soo biiray taleefanka.
Da'da 52, waa wadaad sare oo ka tirsan kaniisadda Bannaanka ee Baabuurta ee Tanda. Tan iyo Isniintii, ninkii Ilaah, sida "caruurtiisa iyo carruurtiisaba", waxay ka dhacdaa mid ka mid ah bangiyada Dugsiyada Sare ee Tanda, si ay u maraan imtixaannada qoran. Haddii imtixaanka bilawga ah, wuxuu ahaa runtii cajalad dugsi sare ah, ma ahan tan iyo Khamiista 20 June 2019, halkaas oo uu ku bartey ardayda fasalkiisa iyo xarunta imtixaanka. Mid ka mid ah su'aalaha mid ka mid ah imtixaannada, ninkii Ilaah wuxuu ku jawaabay isagoo xaqiijinaya in uu yahay caqabad ah inuu naftiisa u dhiibay inuu helo Bepc da'da da'da 52. "Haddii aan helo, waxay u adeegi doontaa tusaale ahaan dadka kale ee waayeelka ah iyo kuwa aaminka ah ee iyaguna dhiiri gelin doona imtixaankan, iyada oo lagu calaamadeeynayo murashax xor ah. Tani, iyada oo aan lahayn wax laga xishoodo ilmo iyo carruurtooda, "ayuu ku jawaabay kormeeraha. Pastor Behi Koffi ayaa sidoo kale sheeganeysa inuu go'aansaday inuu u fadhiisto imtixaankan si uu u horumariyo aqoontiisa. "Hagaajinta aqoonta iyada oo loo marayo diplomasku waxay wax badan ka caawisaa fahamka iyo sharaxaadda waxyaabaha ruuxiga ah," ayuu yiri. Hagaha diinta, oo qorsheynaya in ay bilaabaan caqabado kale, ma joogsadaan halkaas. Ka dib Bepc, wuxuu rabaa in uu wajaho, dhawr sano, Baccalaureate.
Sumarka royal ah? Boqoradda ma iman doonto Booska Carbeed ee Bari ee bisha soo socota. Waa maxay sababta?
Cameroon: Mathias Eric Owona Nguini, Patrice Nganang iyo sumowga qabiilka, Jeune Afrique